Ndị nrụpụta ụlọ ọrụ - Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ China & ndị na-ebubata ya
Ụlọ na azụmahịa nke Office 2021 Maka ngwungwu igodo mkpọsa Windows 2021 hb DVD
Microsoft Office 2021 PC Home na Business
Office 2021 bụ ngwọta zuru oke maka obere azụmaahịa na-achọ ịchekwa oge na ego na mkpa ụlọ ọrụ ha, yana atụmatụ ahaziri maka ndị ọchụnta ego.
Ndị isi ụlọ ọrụ mepụtara mbipụta ọhụrụ a nke Microsoft Office nke maara ihe ọ ga-ewe iji nweta azụmahịa nke gị - na-enyere gị aka ime ka ọrụ dị mfe dị ka akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ ịhazi nzukọ ka ị na-enye mmemme ngwanrọ niile dị ka Okwu na Excel, nke dị mkpa na nke ọ bụla. gburugburu ọrụ ụbọchị nke oge a.
Igbe DVD rụọ ọrụ n'ịntanetị Microsoft Office 2021 Ọkachamara maka PC
Ihe niile pro chọrọ, niile n'otu ụlọ - nke ahụ bụ Microsoft Office 2021 Ọkachamara.
Ọkachamara Microsoft Office 2021 bụ nhọrọ zuru oke maka ọkachamara ọ bụla chọrọ ijikwa data na akwụkwọ.Ọ na-abịa na ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ ga-eme ka ị na-arụpụta ihe n'ọkwa ọ bụla nke mmepe, ma ọ bụ nhazi akwụkwọ ma ọ bụ ịmepụta ihe ngosi site na ọkọ - ihe ọ bụla mkpa gị!
Emezigharịrị ngwaọrụ ndị dị n'ime ụlọ a ka ha wee nwee ike iji ya mee ihe site n'aka ndị na-emepụta ihe na-achọ mkpali maka otu kacha mma isi gosipụta ọrụ ha, yana ndị nyocha data na-arụ ọrụ na nnukwu data data maka akụkọ ụlọ ọrụ ha;ọ nweghị ihe ọ bụla fọdụrụ mgbe ị na-eji ngwa ndị a.
Ụlọ na azụmaahịa Microsoft ọhụrụ 2019 maka igbe igodo mkpọsa PC
Otu igodo maka otu PC, ngwungwu zuru oke & mmelite yana ọtụtụ asụsụ. Anyị na-ekwe gị nkwa na ngwaahịa a ga-adị irè ozugbo etinyere ya.
Ụdị nke ngwanrọ: Microsoft
Aha ngwa ngwa: Ụlọ 2019 Office na Azụmahịa maka PC Retail Box
Asụsụ akwadoro: ọtụtụ asụsụ
Ụlọ Microsoft Office na Business 2019 maka kaadị igodo PC
Gụnyere ụdị Omuma 2019 nke Okwu, Excel, PowerPoint, OneNote na Outlook
• Maka ezinaụlọ na obere azụmaahịa chọrọ ngwa Office na email
• Ịzụta otu oge maka otu ntinye n'otu PC
• Enyere ikike maka ụlọ na azụmahịa
Ụlọ na azụmaahịa 2019 Office Maka isi ụlọ ahịa azụmaahịa Windows 2019 hb ngwugwu DVD zuru oke
Ụlọ Microsoft Office & Azụmahịa 2019 igodo ntinye ọrụ n'ịntanetị
Office 2019 HB Ọ bụ akwụkwọ ndetu dijitalụ nke gị, yabụ ị nwere ike idobe ndetu, echiche, ibe weebụ, foto, ọbụlagodi ọdịyo na vidiyo n'otu ebe.Ma ị nọ n'ụlọ, n'ọfịs, ma ọ bụ na-eme njem, ị nwere ike iburu ya niile n'ebe ọ bụla ị na-aga mgbe gị na ndị ọzọ na-ekerịta ma na-emekọ ihe.Jiri ya maka ọrụ ụlọ akwụkwọ, ọrụ ọrụ, atụmatụ njem, nhazi oriri na ọṅụṅụ, na ndị ọzọ.Ọrụ Tupu na Mgbe ire ere Anyị na-akwado akwụkwọ ikike 3 nla maka nkwado teknụzụ n'efu nke ntuziaka na downl ...
Office 2019 Ụlọ na Ụlọ Akwụkwọ Ngwunye zuru oke 2019 HS na-arụ ọrụ igbe DVD
A naghị edozi ọnụ ahịa, ọ ga-agbanwe dị ka ahịa ahịa si dị, biko kpọtụrụ anyị maka ọnụahịa na ego ọhụrụ.
Ụlọ Office na HS maka kaadị PC 2019
anyị nwere ọtụtụ ụdị sọftụwia dị iche iche, anyị ga-adị ka ngwaahịa na ọnụọgụ dị iche iche iji nye ndị ahịa anyị ọnụahịa kacha mma, maka ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị!